Qeexitaannada: Sidee Fiican Ayaay Shabakadahaaga Internetku Wax U Qabanayaan? | Martech Zone
Qeexitaannada: Sidee Fiican Ayaay Shabakadahaaga Internetku Wax U Qabanayaan?
Talaado, Juun 9, 2015 Douglas Karr
Waxaan kaliya qorsheyneynay webinarkeena soo socda shalay oo waxaan ka wada hadalnay astaamaha qaarkood ee ku saabsan imaatinka, dallacaadda, iyo muddada… ka dibna waxaan maanta helay tan! ON24 waxay soo saartay daabacaadda 2015 ee sannadle ah Warbixinta Webinar Benchmarks, kaas oo falanqeynaya isbeddelada muhiimka ah ee lagu arkay shabakadaha macaamiisha ee ON24 sanadkii la soo dhaafay.
Waxsoosaarka Waxqabadka Webinar Natiijooyinka Muhiimka ah
Isdhexgalka Webinar - 35% boqolkiiba webinars isku dhafan codsiyada warbaahinta bulshada, sida Twitter, Facebook iyo LinkedIn, iyo 24 boqolkiiba webinars waxay adeegsadeen codbixinta si ay si toos ah ula macaamilaan xubnaha dhagaystayaasha. Q & A ayaa ah aaladda ugu caansan ee isdhexgalka 82%.
Isticmaalka Webinar Video - wuxuu arkay kor u kac weyn, laga bilaabo 9% ee 2013 ilaa 16.5% ee 2014, sababtoo ah horumarinta tiknoolajiyada fiidiyowga, kharashyada oo yaraaday, iyo awoodda si kalsooni leh loogu riixo fiidiyowga iyada oo aan la xakameynin xaddiga xawaaraha.
Cabbirka Webinar ee Webinar - Waxaa jira koror muuqda oo shabakadaha waaweyn. Sanadkii 2013 kaliya 1% shabakadaha ayaa soo jiitay in kabadan 1,000 kaqeybgale, halka sanadkii 2014 9% ka mid ah mareegaha mareegaha ay dhaafeen calaamada 1,000. Kordhintaani waxay muujineysaa in websaydhyada soo jiidanaaya in ka badan 1,000 kaqeybgalayaashu aysan ku sii koobnayn dhacdooyinka ay qabtaan shirkadaha waaweyn.
Daawashada Muddada - celcelis ahaan waqtiyada daawashada webinar-ka ayaa sii wadaya ka soo horjeedka isbeddelka warshadaha ku xeeran cunto fudud ka kooban rafcaan qaadashada dareenka kooban. Marka loo barbardhigo celcelis ahaan 38 daqiiqo sanadkii 2010, celcelis ahaan daawashada webinar-ka ayaa si isdaba joog ah kor ugu kacay oo hadda si joogto ah ugu sii socota 56-daqiiqadood calaamadee, oo muujinaysa in websaydhku sii wado inuu ku sii kordho muhiimadda iyadoo iibsadayaashu ay iskood wax u barayaan markay ka shaqeeyaan go'aanka iibsiga.
Daawashada Waqtiyada - Webinars-ka la qabto maalmaha Arbacada iyo Khamiista ayaa leh ka soo qayb galka ugu badan, waxaana ku xiga Talaado. Waqooyiga Ameerika, shabakadaha internetka ee la qabto 11:00 am PT / 2: 00 pm ET ayaa leh ka soo qaybgalka ugu badan.
Imaanshaha iyo Diiwaangelinta - Inta udhaxeysa 35% iyo 45% ee diiwaangeliyeyaasha websaydhka suuqgeynta ayaa ka soo qeyb gala dhacdada tooska ah. Heerkan beddelaadku wuu taagnaa dhawr sano.
Tags: celceliska muddada webinarcelceliska dhererka webinarON24ka qaybgalka webinarkaqeybgalka webinar iyo diiwaangelintacabirka dhagaystayaasha webinarheerarka webinarmudada webinardhererka webinarheerarka suuqgeynta webinarheerarka waxqabadka webinarcabbirada waxqabadka webinardiiwaangelinta webinarcabbirka webinaristicmaalka webinar videomaalmaha daawashada webinarwaqtiyada daawashada webinar
Sare u kaca iibka gudaha 2015
Ku Kordhi Muuqaalka Mashiinka Moobilka Moobilka leh Waxqabadka Moobilka